Migrant Workers Can now Transfer Directly to KBZ Bank Acc Back home | Myanmar Business Today
HomeBusinessMigrant Workers Can now Transfer Directly to KBZ Bank Acc Back home
KBZ Bank and Tranglo,across-border payment hub, have formedaremittance partnership to facilitate inbound foreign money transfers directly into the accounts of KBZ Bank customers. Approved by the Central Bank of Myanmar, this service allows Myanmar workers in countries such as Malaysia, Singapore, and South Korea to send money to their families inafaster, more secure, and more convenient way.
According to Myanmar’s Immigration and Local and Overseas Labour Affairs Committee (Amyotha Hluttaw), there were four million Myanmar workers in foreign countries either officially or unofficially before the COVID-19 period, while the International Labour Organization estimates 10 percent of Myanmar’s labor force is working abroad. Meanwhile, the World Bank estimates USD 3.035 billion was remitted by migrant workers in 2019, or approximately 4.6 percent of Myanmar’s GDP, which does not include the millions that are informally remitted through brokers or hand-carried back home to family members.
Migrant workers who transfer their earnings from abroad to loved ones in Myanmar typically use over-the-counter services which are time-consuming for them and the beneficiaries. With the new service offered by Tranglo, the beneficiary will receive money remittance in real-time directly into their KBZ Bank Current, Saving Deposit or Call Deposit account. This means the beneficiary can immediately view and access the funds through their iBanking or mBanking account, and have the choice to withdraw the funds ataKBZ Bank ATM or cash out to their KBZPay mobile wallet instead of having to visitabank branch. Unlike some money remittance services, the beneficiary will not need to pay any transaction fees to receive the funds transfer directly into their KBZ Bank account.
“Instead of using traditional or informal means of remitting money, we encourage migrant workers to take up this reliable method of transferring money directly into the beneficiary’s KBZ Bank account. This also presents time and cost savings for the beneficiary who does not need to travel toabank branch or wait in line,” said Mr. Stoney Hsia, Head of Wholesale Banking, KBZ Bank.
Persons who wish to remit money to Myanmar through Tranglo can visit one of their counters or the branches of their partners such as GPL and MaxMoney in Malaysia, SlidesSG in Singapore or GME in South Korea. The maximum amount for each remittance transaction to Myanmar is the Myanmar Kyats (MMK) equivalent of USD 5,000. The beneficiary’s name and KBZ Bank account number are needed to perform the transfer.
“One of our priorities in times of uncertainty is ensuring the safety of workers and their families back at home. With our technology and KBZ Bank’s presence in the country, long queues at the bank areathing of the past. Our API will allow beneficiaries to receive money in their KBZ Bank accounts directly, quickly, and securely,” Tranglo CEO Jacky Lee said.
With the expansion of its services to Myanmar as an authorized Money Transfer Operator (MTO), Tranglo further extends its global network that includes countries such as China, Indonesia, and Singapore. Tranglo utilizes leading technology that makes cross-border transactions faster, cheaper, and more secure.
ကမ္ဘောဇဘဏ်နှင့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ငွေလွှဲပေးပို့ရန် အဓိက ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည့် ကုမ္ပဏီ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သော Tranglo တို့သည် ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားငွေလွှဲများကို ကမ္ဘောဇဘဏ် customer များ၏ ဘဏ်အကောင့်သို့ တိုက်ရိုက်ပေးပို့နိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှု ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ခွင့်ပြုချက်အရ ပေးအပ်သွားမည့် ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု၍ မလေးရှား၊ စင်ကာပူနှင့် တောင်ကိုရီးယား အစရှိသော နိုင်ငံများမှ မြန်မာ အလုပ်သမားများမှာ ပိုမို လွယ်ကူ၊ မြန်ဆန်ပြီး လုံခြုံစိတ်ချရသော လမ်းကြောင်းဖြင့် မိမိတို့၏ မိသားစုထံ ငွေပေးပို့နိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ အလုပ်သမားဆိုင်ရာကော်မတီ (အမျိုးသားလွှတ်တော်) ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါမဖြစ်ပွားမီ ကာလအတွင်း ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ တရားဝင်ဖြစ်စေ၊ တရားမဝင်ဖြစ်စေ သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေကြသော မြန်မာအလုပ်သမား (၄) သန်းရှိသည်ဟု ဖော်ပြထားပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုပ်သားအင်အားစု၏ (၁၀) ရာခိုင်နှုန်းသည် ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် အလုပ် လုပ်ကိုင်နေကြသည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ခန့်မှန်းချက်အရ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ငွေလွှဲပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃.၀၃၅) ဘီလီယံခန့်ရှိပြီး အဆိုပါ ပမာဏမှာ မြန်မာနိုင်ငံ GDP ၏ (၄.၆) ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ အဆိုပါ ငွေလွှဲပြောင်းမှုများတွင် ပွဲစားများမှတဆင့် တရားမဝင် ငွေလွှဲပြောင်းမှုများ၊ မိသားစုဝင်များထံ အလုပ်သမားကိုယ်တိုင် သယ်ဆောင်လာမှုများမှ ဝင်ရောက်လာသည့် သန်းပေါင်းများစွာသော ငွေပမာဏများ မပါဝင်ပါ။
ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား အများစုသည် နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် မိမိတို့ ရှာဖွေစုဆောင်းထားသော လုပ်အားခများကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ မိသားစု၊ ချစ်ခင်ရသူများထံသို့ ငွေလွှဲရာတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် ပေးပို့သူနှင့် လက်ခံရရှိသူ နှစ်ဦးစလုံးအတွက် အချိန်ကြန့်ကြာသည့် ဘဏ်တိုက်ရိုက်မဟုတ်ဘဲ ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီး ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုသာ အသုံးပြုလေ့ရှိကြသည်။ Tranglo က ပေးအပ်လိုက်သည့် ဝန်ဆောင်မှုအသစ်အရ ငွေလွှဲလက်ခံသူသည် ၎င်း၏ ကမ္ဘောဇဘဏ် စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း(Current Account)၊ ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်း (Saving Deposit Account) (သို့မဟုတ်) ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း(Call Deposit Account) များမှတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက်၊ ချက်ချင်း ငွေလက်ခံ ရယူနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ငွေလွှဲလက်ခံသူများမှာ မိမိတို့၏ iBanking (သို့မဟုတ်) mBanking အကောင့်များသို့ ဝင်ရောက်ပြီး ငွေအဝင်ကို ချက်ချင်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်မည်ဖြစ်သည့်အပြင် ငွေထုတ်ယူရာတွင်လည်း ဘဏ်ခွဲများသို့ သွားရောက်စရာ မလိုတော့ဘဲ နီးစပ်ရာ ကမ္ဘောဇဘဏ် ATM စက်တွင် ငွေလွှဲထုတ်ယူခြင်း (သို့မဟုတ်) ၎င်းတို့၏ KBZPay မိုဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ် များမှတစ်ဆင့် ထုတ်ယူနိုင်ခြင်း စသဖြင့် မိမိအတွက် အဆင်ပြေမည့်နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အချို့သော ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုများနှင့် မတူသည့် အချက်မှာ ငွေလွှဲလက်ခံသူဘက်က အခကြေးငွေ တစ်စုံတစ်ရာ ပေးရန်မလိုအပ်ဘဲ ငွေများအားလုံးကို မိမိတို့၏ ကမ္ဘောဇဘဏ်အကောင့်ထဲသို့ တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်း ရယူနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
“ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ အရင်သုံးနေကျ အလွတ်သဘောနဲ့ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုတွေကို သုံးမယ့်အစား ကိုယ်လွှဲပေးချင်တဲ့သူရဲ့ ကမ္ဘောဇဘဏ်အကောင့်ထဲကို တိုက်ရိုက်ပေးပို့နိုင်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို ပြောင်းသုံးကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။ ဒီဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဆိုရင် ငွေလက်ခံမယ့်သူကလည်း ဘဏ်ခွဲရှိတဲ့နေရာ သွားဖို့၊ ဘဏ်မှာတန်းစီဖို့ မလိုတော့တဲ့အတွက် အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန် သက်သာစေပါတယ်” ဟု ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ Head of Wholesale Banking ဖြစ်သူ Mr. Stoney Hsia က ပြောသည်။
Tranglo ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ငွေလွှဲလို သူများသည် Tranglo ၏ ငွေလွှဲကောင်တာများ (သို့မဟုတ်) မလေးရှားနိုင်ငံရှိ MaxMoney ၊ စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ SlidesSG ၊ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရှိ GME စသည့် မိတ်ဖက်ကောင်တာများတွင်လည်း သွားရောက်ပြီး ငွေလွှဲနိုင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ငွေလွှဲလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုလျှင် အများဆုံး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅,၀၀၀) နှင့် ညီမျှသော မြန်မာကျပ်ငွေကို ငွေလွှဲပေးပို့နိုင်ပြီး ငွေလွှဲ လုပ်ဆောင်ရန် ငွေလက်ခံမည့်သူ၏အမည်နှင့် ၎င်း၏ ကမ္ဘောဇဘဏ်အကောင့်နံပါတ်တို့ လိုအပ်သည်။
“အခုလို နောင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ မှန်းဆလို့မရနိုင်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့အတွက် အဓိက ဦးစားပေးကတော့ အလုပ်သမားတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ မိသားစုတွေ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာနဲ့ အိမ်ပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နည်းပညာရယ်၊ ကမ္ဘောဇဘဏ်ရဲ့ ပြည်တွင်းမှာ အခိုင်အမာ ရပ်တည်နေမှုရယ် ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါ ဘဏ်မှာအကြာကြီး တန်းစီနေရတယ်ဆိုတာ အရင်ကအဖြစ်အပျက်တစ်ခု အနေနဲ့သာ ရှိနေတော့မှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ API ကလည်း ငွေလွှဲလက်ခံမယ့်သူတွေရဲ့ ကမ္ဘောဇဘဏ်အကောင့်တွေထဲကို အမြန်ဆုံး၊ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာနဲ့ တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု Tranglo ၏ CEO ဖြစ်သူ Jacky Lee က ပြောသည်။
Tranglo သည် တရားဝင် ခွင့် ပြုချက်ရ ငွေလွှဲလုပ်ငန်း (MTO) တစ်ခုအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးချဲ့ပေးအပ်နေပြီး တရုတ်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ စင်ကာပူ အစရှိသော နိုင်ငံများ အပါအဝင် ၎င်း၏ နိုင်ငံတကာကွန်ရက်ကိုလည်း ဆက်လက် တိုးချဲ့နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။ Tranglo သည် ၎င်း၏ ထိပ်တန်းနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ငွေလွှဲပေးပို့မှုများကို ပိုမို လျင်မြန်၊ စိတ်ချနိုင်ပြီး ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက် ရှိသည်။
Previous articleNo Need to Worry About Food Shortage: Minister of Commerce
Next articleCarlsberg Myanmar Celebrates 6th Consecutive Year with no ‘Lost Time Accidents’ at Bago Brewery